Mayelana NATHI - Kingtone Glass Products Co., Ltd.
I-Xuzhou Kingtone Glass Products Co, Ltd
I-Xuzhou Kingtone Packing ingumhlinzeki ohamba phambili we-premium kanye nokukhethekile kokufakwa kwengilazi kokudla nesiphuzo, imboni yokunakekelwa komuntu siqu.I-Xuzhou Kingtone Glass Products Co, Ltd ngumnyango wezokuhweba wamazwe omhlaba wakwaDahua. Sasungulwa ngo-1985 futhi sineminyaka engaphezu kwengu-20 sikhiqiza isipiliyoni. Sinolwazi oluningi lokukhiqiza lobuchwepheshe futhi sinobuchwepheshe obuqinile namadivayisi wokukhiqiza athuthukile. Sihlala senza imikhiqizo ngokuya ngezinga lombuso futhi imikhiqizo yethu idume eChina ngekhwalithi ephezulu. Sidlule ngempumelelo i-ISO9001: 2000 Certification.Our amakhasimende azungeze umhlaba wonke, emazweni angaphezu kwe-100.
Thinazazisungulwa ngo-1985 futhi babe engaphezu kwengu-20 yokukhiqiza isipiliyoni. Sinolwazi oluningi lokukhiqiza lobuchwepheshe futhi sinobuchwepheshe obuqinile namadivayisi wokukhiqiza athuthukile.
“Izinga eliphezulu, amanani aphansi nensizakalo eningi emva kokuthengisa” kungumgomo wethu, “Ukwaneliseka Kwamakhasimende” umgomo wethu waphakade; Imikhiqizo yethu iye yaziwa kabanzi ezimakethe eziningi ekhaya nasemhlabeni jikelele.
Sinegama elihle lokunikeza ubuciko nobuciko obusezingeni eliphakeme. Ngasikhathi sinye, sigcina intengo isezingeni elincintisanayo nabathengi ukuze babe namathuba amaningi nenzuzo emakethe.
Sine iminyaka engaphezu kwengu-20 + isipiliyoni umkhakha
Ngokuqondile, iXuzhou Jintong inikeza ngamabhodlela engilazi nezinsiza ezahlukahlukene (okokudonsa, amaphampu wokufafaza, amakepisi ayindilinga, izinduku zomoba, amakhokho namakepisi). Sineminyaka ecishe ibe ngu-20 yesipiliyoni embonini yokupakisha futhi singanikeza ngemikhiqizo esezingeni eliphezulu futhi emisha yokupakisha ingilazi ngobuhle bomhlaba wonke nemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba.
Zonke izindawo zethu zokukhiqiza ezisezingeni eliphakeme zihlangabezana nezindinganiso zase-US futhi ziqinisekiswe yi-FDA, ngakho-ke sikwazi ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe. Ngaphezu kwalokho, inkampani futhi inezinto zokuphrinta kwesikrini, ukudweba, ukukhulula, ubuchwepheshe bokuqothula, ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe enziwe ngezifiso.Sinamakhilomitha angaphezu kwama-60,000 ezinqolobane lapho sigcina khona imikhiqizo engaphezu kwezigidi ezingama-20 ukuqinisekisa ukwaneliseka kwamakhasimende ngokushesha futhi ugcine izikhathi zokulethwa ezimfushane.